Ithegi: isicelo seselfowuni
I-salonist yi-software ye-salon enceda i-spa kunye nee-salon ukulawula ukubhatalwa, ukubhatala, ukubandakanya abathengi bakho, kunye nokwenza iindlela zokuthengisa. Amanqaku abandakanya: Ukuseta ukuBekwa kweeSpas kunye neeSalons kubhukisho kwi-Intanethi -Sebenzisa isoftware yokubhukisha ekwi-Intanethi, abathengi bakho banokucwangcisa, baphinde bacwangcise, okanye barhoxise amadinga naphi na apho bakhoyo. Sinezinto zombini zewebhu kunye neapps ezinokudityaniswa ne-Facebook kunye ne-Instagram izibambo zemidiya yoluntu. Ngale nto, inkqubo yokubhukisha iyonke iphelele
Ukudibanisa: Iqonga elisezantsi leKhowudi yoSetyenziso lwaBathengisi
NgeCawa, uJuni 21, 2020 NgeCawa, uJuni 21, 2020 Douglas Karr
Ukuba awulivanga igama elithi Progressive Web App, yitekhnoloji ekufuneka uyiqwalasele. Khawufane ucinge ilizwe elihlala phakathi kwewebhusayithi eqhelekileyo kunye nesicelo esiselfowuni Inkampani yakho inokunqwenela ukuba nesicelo esomeleleyo, esinobutyebi esibandakanyeka ngakumbi kunewebhusayithi… kodwa singathanda ukuhlawula iindleko kunye nobunzima bokwakha usetyenziso olufuna ukuba lusetyenziswe kwiivenkile zeapp. Yintoni ukuSebenza kweWebhu okuqhubekayo (PWA)?
NgoLwesine, uJanuwari 23, 2020 NgoLwesine, uJanuwari 23, 2020 UBobby Gill
Naphi na apho ujonga khona, kuyacaca ukuba itekhnoloji yeselfowuni iye yadityaniswa eluntwini. Ngokutsho koPhando lweMarike eManyeneyo, ubungakanani bemakethi ye-app kwihlabathi liphela yafikelela kwi-106.27 yezigidigidi ngo-2018 kwaye kuqikelelwe ukuba ifike kwi-407.31 yezigidigidi ngo-2026. Njengoko intengiso yeselfowuni iqhubeka nokukhula, ukubaluleka kweenkampani ezibandakanya abathengi bazo ngeapps yeselfowuni kuya kuba phezulu kakhulu. Ngenxa yotshintsho lwe
Njengoko isakhelo sendalo esihambahamba sinciphisa ixesha lophuhliso kwaye sihlisa iindleko zophuhliso, usetyenziso lweselfowuni luye lwaba yinto ekufuneka yenziwe ziinkampani ezininzi ukuqhuba izinto ezintsha. Ukwakha isicelo sakho esiphathwayo akuyondleko kwaphela kwaye akunakuphepheka njengoko bekuyiminyaka embalwa edlulileyo. Okwenza ukuba ushishino lubangele ukuba iinkampani zophuhliso lwe-app ezineziko elithile lobungcali kunye nezatifikethi, zonke zinoburharha ekwakheni izicelo zeshishini ezinokuthi zibe nefuthe elihle kuyo yonke imiba yeshishini lakho. Zisebenza njani iiFowuni